Ihe ọkacha mmasị gụnyere Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, Ha Long Bay
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » Ihe ọkacha mmasị gụnyere Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, Ha Long Bay
Njem njem • Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ebe E Si Nweta Foto: lzf / Shutterstock
Ebe ụfọdụ mba na -amalite ibuli ihe mgbochi maka ndị njem ọgwụ mgbochi, Instagram Hashtags maka ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa a ma ama na -egosi ọchịchọ ndị njem. Otu ụlọ ọrụ dị na UK na -ahụ maka nchekwa ego wepụtara akụkọ.
Ndị America, ndị Europe, ndị China, ndị njem Japan na-agụta ụbọchị iji nyochagharị ụwa ọzọ n'eziokwu COVID-19 gara aga.
Hash Tags na Instagram bụ ezigbo ihe ngosi ebe ndị njem nwere ike chọọ ịla ọzọ, na Niagara Falls n'akụkụ ogige Yosemite na Grand Canyon na -ebute ndepụta ahụ
Ọ bụ ihe nwute na nnukwu Pyramid nke Giza natara ọnụ ọgụgụ Hashtags kacha nta na Instagram n'oge nsogbu na -aga n'ihu, mana ikpe ikpe maka pyramid a ga -agbanwe, ozugbo ụwa mepere ọzọ.
Obere ihe achọrọ maka njem nlegharị anya COVID bụ ebe dị ka Ugwu Kilimanjaro, na Victoria Falls. Nke a bụ otu ọgbakọ dị njikere ịrịgo ọkwa Instagram dị ka Komodo Island, Angel Falls na Venezuela ma ọ bụ Great Barrier Reef na Australia.
Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na United States, yana ịmalitegharị mba ahụ maka njem ụlọ, mere ka ndị njem America laghachi n'okporo ụzọ ọ na -egosi.
Ọzọkwa Iceland ghe oghe maka ndị ọbịa na Northern Lights ghọrọ ọkacha mmasị n'etiti ndị na -eziga na Instagram.
Ugwu Everest dị na Nepal ka bụ ebe anwansi maka Instagram. Ihe ngosi Ejiji na -abịanụ n'elu elu kachasị elu n'ụwa ga -agbakwunye Guinness World Record na foto a.
Ihe Kacha Eke Grammed Natural ugbu a bụ:
Kacha ewu ewu Ebube Country
#4 Aurora Borealis/Ọkụ Ugwu Iceland 3,362,055
#6 Agwaetiti Galapagos Ecuador 2,012,669
#7 Ugwu Everest China/Nepal 1,793,316
#8 Oguta Delta Romania 1,499,237
#9 Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ Jọdan/Israel 1,288,628
Ihe ijuanya eke nwere mmasị kachasị na Instagram bụ Niagara Falls, dị na mbata nke Canada na USA, nwere ihe karịrị 5.7 nde hashtags na Instagram.
Ogige Ntụrụndụ Yosemite, USA
Ebe E Si Nweta Foto: Andrew Opila / Shutterstock
Ekpuru okpueze dị ka ihe ịtụnanya okike kacha mara amara n'ụwa, Yosemite National Park akwadowo ihe ruru puku 5,000,000 Instagram hashtags na ngwa mgbasa ozi mmekọrịta ama ama.
Echere na ọ na -anọchite anya ike, ntachi obi na obi iru ala, Ogige Ntụrụndụ Yosemite dị n'America bụ ebe obibi narị narị square nke ihe ịtụnanya sitere n'okike, site na nsụda mmiri mara mma ruo ahịhịa na ndagwurugwu ndị mara mma. Ndị na -eleta ihe ịtụnanya eke na -ejupụta nri ha na foto na -eleghara glaciers na elu dị egwu. Site na ntinye oge na foto agbamakwụkwọ etinyere, Yosemite yiri ka ọ bụ ebe kachasị mma maka atụmatụ echefu echefu na ịgba nkwa.
N'ịdebe ya dị ka ihe ịtụnanya kachasị mma nke Instagramm n'ụwa, Niagara Falls chịkọtara hashtags 4,607,444 na Instagram.
N'inwe ọtụtụ ebe njem nlegharị anya dị n'akụkụ mpaghara ahụ, ọtụtụ puku mmadụ na -agbada na akara ngosi Canada kwa ụbọchị iji hụ nsụda mmiri kristal dị ebe ahụ wee kụọ ihe n'ihu mmiri mmiri nke abụọ kachasị elu na mbara ala.
Nnukwu Canyon, USA
Ebe E Si Nweta Foto: Jim Mallouk / Shutterstock
Onye Teddy Roosevelt chepụtara dị ka 'otu ihe kacha hụ onye America ọ bụla kwesịrị ịhụ', ọ bụghị ihe ijuanya na Grand Canyon na -ewere dị ka ihe ịtụnanya okike atọ kacha atọ ụtọ n'ụwa.
Na ogologo kilomita 277, ihe dị ka nde ndị njem nde isii na -eleta ihe ịtụnanya ama ama nke ala, yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na etinyerela ihe karịrị ugboro 6 na Instagram ruo ugbu a. N'ịbụ nke ihe okike kpụrụ nke ọma, a na-ama Grand Canyon maka ịbụ otu n'ime ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa kacha sie ike mana agba agba.
Ọzara Sahara, Afrịka
Ọzara nke mbụ na listi ahụ, Sahara na -enweta aha nke anọ kacha nwee ihe ịtụnanya eke ụwa na Instagram, yana ihe karịrị 2,200,000 hashtags Instagram.
N'ịgbasa ọmarịcha kilomita 8,600,000, Sahara na -ejikọ na mba iri na otu nke Afrịka ma nwee otu ụzọ n'ụzọ atọ nke kọntinent ahụ niile! Ogige ndị ahụ mara mma nwere ihe karịrị iri anụmanụ iri asaa, mana ihe ijuanya sitere n'okike ka ama ama maka ịdị jụụ ya na ịdị jụụ ya.
Ebe E Si Nweta Foto: aaltair / Shutterstock
Danube Delta nke dị na Romania gbara ihe ise kachasị mma na Instagrammable, na -ewere hashtags 1,638,573 dị ukwuu na Instagram.
Nke abụọ kacha ukwuu n'ụdị ya na Europe, Danube River Delta bụ nhazi ala sitere na sedimenti echekwara site na mmiri wee banye n'oké osimiri gbara ya gburugburu. Osimiri na -acha anụnụ anụnụ na -adọta ọtụtụ ndị njem, ọtụtụ n'ime ha na -eji foto Instagram dị mkpa na -eme njem nleta ụgbọ mmiri ma ọ bụ na -ejide anụ ọhịa gbara ya gburugburu.
Agwaetiti Galapagos, Ecuador
N'ịbụ ndị na -erughị nke ise kachasị elu, agwaetiti Galapagos bụ ebe isii kacha nwee ihe ịtụnanya eke Instagram, yana hashtag 1,612,457 sitere na ndị ọbịa.
Dabere n'Ecuador, agwaetiti Galapagos bụ ebe ọtụtụ ihe na -eme mgbawa na ama ama maka aha ha na ozizi evolushọn Darwin. Kedu ihe ọzọ, agwaetiti Galapagos dị nso na akara ala, nke pụtara na ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ihu igwe ọkụ n'afọ niile!
Ọ bụ ezie na agwaetiti ndị ahụ na -eme onwe ha dị ka ihe nkiri dị egwu, ọtụtụ foto med Instagram nke ihe ịtụnanya na -egosipụta ihe okike mmiri nwere ike ịhụ ebe ahụ, na -eme ka okike okike a bụrụ ebe zuru oke maka ndị hụrụ anụ ọhịa n'anya!
Ebe E Si Nweta Foto: sanyanwuji / Shutterstock
Ekpuru okpueze dị ka ihe ịtụnanya okike nke asaa kachasị ewu ewu na Instagram, Ha Long Bay na Vietnam hashtagged ugboro 1,243,473.
Ọ na -enye ndị njem nleta nnukwu ọgba, mmiri emerald na agwaetiti ndị a pịrị apị na nkume nzu, Ha Long Bay bụ ebe ama ama nke ukwuu maka ịrị ugwu, imikpu mmiri na ime njem. Site na imerime anụ ọhịa mmiri na ụlọ elu nke limestone mebiri emebi, nhazi ihe okike Ha Long Bay na-emepụta ọmarịcha oke osimiri maka ndị ọbịa na-achọ ịkwalite nri ha.
Kacha mara dị ka Northern Light, Aurora Borealis dị na Iceland na -enweta aha nke asatọ kachasị ịtụnanya Instagrammable n'ụwa, na -enweta hashtags 1,167,915 ugbu a.
Akpọrọ ya aha chi nwanyị chi ọbụbọ nke Rom, Aurora Borealis na -enwe ọmarịcha ihe ngosi n'abalị gbara ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na ejighị n'aka, ndị njem na -enwe ihu ọma ịhụ ihe nkiri ahụ na -ahụ otu n'ime ihe ịtụnanya okike mara mma kachasị mma na mbara ala, yana iyi egwu na -enwu gbaa na mbara igwe doro anya.
N'ihi eziokwu ahụ bụ na enwere ike ijide ọkụ ebe ugwu mgbe ọnọdụ ụfọdụ dabara, ọ bụghị ihe ijuanya na Aurora Borealis na -edobe hashtags ole na ole karịa ụfọdụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ sitere n'okike!
Ugwu Everest, China / Nepal
Ebe E Si Nweta Foto: Anton Rogozin / Shutterstock
Site na 1,125,527 Instagram hashtags n'ozuzu, a na -akpọ Mount Everest nke iteghete ihe ịtụnanya eke ụwa kacha mma n'ụwa.
Dị ka ugwu kachasị ogologo n'ụwa, na -eguzo na nnukwu ọmarịcha mita 29,000, Ugwu Everest bụ otu n'ime ebe ndị njem ama ama n'ụwa. N'ịchọsi ike ijide ọmarịcha ịdị elu, ndị ọbịa na -agakarị na Instagram ịkekọrịta echiche na -akpali akpali.
Pamukkale dị na Turkey na -etinye ihe karịrị iri na iri na narị puku itoolu na iri itoolu na iri bụ ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa nke iri kacha mara amara n'ụwa, na -emechi ndepụta ahụ.
N'ịbụ ndị nwere akwa nchara nchara na -acha ọcha ice, mbara ala mara mma na mmiri ara ehi, ọdọ mmiri ọkụ Pamukkale na -adọta ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile ma bụrụ nnukwu ihe egwu maka ndị Instagrammers na -achọ imeziwanye nri nri ha.
Ka ọ dị ugbu a, akara ngosi dị egwu dị ka agwaetiti Komodo, Great Barrier Reef na Cliffs of Moher niile enwetaghị oghere iri kachasị elu, na -enweta 83,569, 817,956 na 635,073 hashtags n'otu n'otu.